15 April, 2018 in by Adam Increase
Xaflad khayri ah si weyn loo soo agaasimay xuska habeenka dheelmitaanka nebi Maxamed cs ayaa lagu qabtay xalatoole xarunta ganacsiga magaalada Zurich ee dalka Switzerland kaaso dhaca bartamaha qaaradda Yurub. Kulankan balaaran oo ay ka soo qayb galee
Xaflad khayri ah si weyn loo soo agaasimay xuska habeenka dheelmitaanka nebi Maxamed cs ayaa lagu qabtay xalatoole xarunta ganacsiga magaalada Zurich ee dalka Switzerland kaaso dhaca bartamaha qaaradda Yurub. Kulankan balaaran oo ay ka soo qayb galeen muslimiinta ku nool cariga Swiskka iyo dalalka ku hareereysan qaarad wadaaggu yihiin ayaa taariikh diini ah qalbiyada taabanaysa waxaa ka jeediyay culimada waaweyn geeska Afrika ku nool waddamada Galbeedka.
Sheekh Maxamuud Guriceel oo ka yimid dalka Sweden ayaa bilowgii aad ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay Leylatul Micraajka oo ah habeenkii rasuuluLLaahi Maxamed cs na loogu soo dhiibay 5ta salaadood faralka kuna ajirka ah 50 salaadood, waxaana la arkayay dadkii goobta fadhiyay oo aad ugu dhagraaricinaya taariikhda cajiibka ah axwaasha caalamka kore meelaan Bini Aadan tagin hortii nebi Maxamed cs ee uu shiikhu si waadix ah u balballaarinayay, taaso misna qushuuc muuqda gelisay dhamaan martisharifkii khayrka saamahooda u soo qaaday. Intii ay siiradani socotay culimadu ay cibarku isugu tooko dhaafsanayeen, waxaa sido kale kitaabadiisi aqooneed ee diinta Islaamka la soo baxay sheekh Axmed Buuri oo ka mid ah shiyuuqda waaweyn ee Soomaalida haatan ku nool Switzerland, kaaso awalan xafladda ku furay aayaadka Quraanka Kariimka qawlkii Eebbe dabadeedna taariikhda dhaxalgalka ah rasuulka ee samada halkaa ka jeediyay. Waxaa isna goobtan aqoonyahanada diinta Islaamka la isku arkay si aan caadi ahayn uga muuqanayay Macalin Cumar Faaruuq Macalin C/Raxmaan oo araxda kaga riday bulshadii soo xaadirtay xuska safarkii mucjisada ahaa rasuuluLLaahi Maxamed cs 7da samo caalam aan dayaxgacmeedku gaarin ku tagey. Silsiladaha khayrkan iyago bartanka lagaga jiro waxay indhuhu qabanayeen dhaguhuna maqlayeen kaalintiisa siirada Leylatal Micraajka Sheekh Axmed Saalim oo isna axaaddiista taariikhdan Islamka ku weyn nusuustu iyo ducooyinka qodba qodbaynayay si jahli iyo Iblays la dirir ah hadal qiimi badan ku toosan jidka Jannada halka la wada doonayo.
Ugu dambeyntii xafladda oo uu xiriirinayay Macalin Nuur Macalin Carabey oo had iyo jeer isu imaatinka kulumada Khayri u darban, islamarkaana caruurta muslimka ah bara kuna barbaarinaya diinta amaanadii Nebi Maxamed khaatamul ambiyaa ayaa waxaa ay ku soo idlaatay jawi aad u heer sareeya.
Dunida Islaamka ayaa si aan khilaaf lahayn sanadkiiba mar gudaha bisha Rajab looga xusaa Leylatal Micraajka oo ku beegan xiligii salaadda nalagu soo faralka yeelay rasuulkana la soo tusay awoodaha waaweyn ee aan caadiga ahayn ee Rabbulciza u horeeyaan Naarta iyo Jannada iyo weliba qaab nololeedka uunka Malaga'igta ah ee aan marnaba Illaahay caasin.
Tawxiidkaa lagu hodmaa tukashadaana lagu tanaadaa sida ku taal diinteena taladu ku dhantahay tafsiirkeedana laakiin!!
i Arka i Arka I Qariya I Qariya Ayaa Ka Dambeyso
Schil Dayaaradeed Sababaey Dhimasho oo Ka Dhacey Kenya